डा.केसीको समर्थनमा विराटनगरमा लाग्यो नारा : हामीलाई थाहा छ, सरकासंग सुन्ने र वुझ्ने क्षमता छ ? – Nepal Online Khabar
डा.केसीको समर्थनमा विराटनगरमा लाग्यो नारा : हामीलाई थाहा छ, सरकासंग सुन्ने र वुझ्ने क्षमता छ ?
September 26, 2020 66
विराटनगर : युवाहरुले चिकित्सक शिक्षा सुधारको माग राख्दै आ’मरण अ’नशन बसेका डाक्टर गोबिन्द केसीको पक्षमा विराटनगरमा एक घण्टा अनशन बसेका छन् ।
शनिवार विराटनगर स्थित ट्रफिक चोकमा डाक्टर केसीको जीवनरक्षा र उनले उठाएको माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै युवाहरुले एक घण्टा अनbसन बसेका हुन । जुम्लाबाट अन’शन सुरुगरेका डाक्टर केसी भदौ २९ गतेदेखि १९ औं पटक अनश’नमा वसेका छन् ।
युथ कांग्रेसको अगुवाइमा सवै क्षेत्रका युुवाहरुले, हामीलाई थाहा छ सरकासंग सुन्ने र वुझ्ने क्षमता छ , डाक्टर गोविन्द केसी म पनि हो, म जनताको सुरक्षाको लागि खटिएको छु जस्ता नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेका थिए भने गोविन्द केसीको मु’खुन्डो लगाएर वि’रोध गरेका थिए ।
युवाहरुले सरकारले डाक्टर केसीलाई अमानविय व्यावहार गरेको र स्वच्छ छवि भएका डा’क्टर केसीले चिकित्सक क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै बषौं देखि अनशन बस्दै आएता पनि कुनै सुधार गर्न नसकेको आ’रोप लगाएका छन् । उनीहरुले केसीको समर्थनमा सवै युवाहरु साथ रहेको भन्दै समर्थन स्वरुप अनसन वसेका थिए ।
Prevभोजपुरमा दैनिक दश लाखको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुँदै…हेर्नुहोस् ।
Nextबिग्रेट कमा’न्डर देवेन्द्र पुनको “मन्दिरमा पुज्ने ” भिडियो सार्बजनिक…हेर्नुहोस् ।
Good News : नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण रोकियो…हेर्नुहोस् । सक्दो सेयर गरौ ।